नम्रतालार्इ बाह्य संसारसँग किन प्रतिबन्ध? - कला - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
नम्रतालार्इ बाह्य संसारसँग किन प्रतिबन्ध?
नेपालखबर २० मंसिर
पछिल्लो समय नम्रता श्रेष्ठ मिडियामा देखिएकी छैनन्। आफूले अभिनय गरेका फिल्मको प्रवद्र्धनमा उनलाई सहभागी गराउन पनि निकै जोडबल लगाउनु पर्ने स्थिति बन्दै गएको छ।
आउँदै गरेको फिल्म ‘प्रसाद’ प्रवद्र्धनका लागि निर्देशक दिनेश राउत र नायक निश्चल बस्नेतको विशेष आग्रह गरेका थिए। त्यसपछि मात्रै उनी केही छानिएका मिडियामा देखिइन्।
डेढ वर्षपछि फिल्ममा फर्कन लागेकी ब्युटीफुल नम्रतासँग सञ्चारकर्मीलाई समेत समय पाउन सजिलो छैन। नजिकका केही मात्र हिजोआज उनीसँग सम्पर्क गर्न सक्छन्।
नम्रतालाई प्रायः सञ्चारकर्मीले अन्तिममा ७७ भएको मोबाइल नम्बरमा फोन गर्छन्। तर त्यो उनले उठाउँदिनन्। प्रेमी स्टेफन दावा शेर्पाले उठाउँछन्। उनी नहुँदा नम्रताकी सहयोगीले उठाउँछिन्।
दावाले फोन उठाउँदा नम्रताबारे सोधखोज गरे सुरुमै फोन काटिदिन्छन्। सहयोगीले उठाए के कुरा हो दिदीलाई म भनिदिन्छु भनेर टार्छिन्। आफूलाई जानकारी भएको विषय भए आफैँ भन्छिन्। तर नम्रतासँग सम्पर्क हुन सक्दैन।
नेपाली रजतपटकी उत्कृष्ट नायिकासँग सञ्चारकर्मीले अन्तर्वार्ता वा समाचार सामग्रीका लागि सम्पर्क गर्न चाहनु स्वभाविक हो। हुन त नम्रतालाई आफ्नो विगतबारे कुरा गरेको पटक्कै मन गर्दैन। पछिल्लो समय उनी जीवनशैलीबारे पनि कुरा गर्न रुचाउन छाडेकी छिन्।
सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा पनि उनी दावासँग मात्र देखिन्छिन्। फिल्म सूट, फिल्म हल, पार्टी, अन्तर्वार्ता वा अन्य कार्यक्रम दावा उनीसँगै हुन्छन्। उनलाई नजिकबाट चिन्नेहरु भन्छन्, ‘नम्रता आफ्नो विगतको घटना सुन्दा दुःखी बन्छिन्। दावा उनलाई त्यसबाट टाढै राख्न प्रयासरत छन्।’
उपन्यास चर्चाले तनाब
पत्रकार सबिन प्रियासनलाई नम्रताले केही वर्षअघि आफ्नो जीवनी समेटिएको उपन्यास लेख्न सहमति दिएकी थिइन्। सबिनले लामो समय लगाएर उपन्यास लेखे पनि। उपन्यास आउने चर्चासँगै फेरि अश्लिल भिडियोको विषयमा विभिन्न टीका–टिप्पणी सुरु भए। हाल पोर्न साइटहरुले राखेका भिडियोबारे चर्चा भयो। योसँगै नम्रताले उपन्यास प्रकाशित गर्ने पूर्व अनुमति रद्द गरिन्।
उनलाई नजिकबाट चिन्नेहरु निर्णयबाट पछि हट्नुको कारण पनि भिडियो प्रकरणलाई मान्छन्। प्रेमी दावासँगको छलफलपछि उनले यो निर्णय गरेको कतिपयको दाबी छ।
हाल सबिनले पाण्डुलिपी नम्रतालाई दिएका छन्। तर उनले अहिलेसम्म कुनै रेस्पोन्स पाएका छैनन्। नम्रता यस विषयमा मौन बसेपछि सबिन भने अहिले अर्कै उपन्यास प्रकाशनको तयारीमा लागेका छन्। पुसमा उनको आफ्नै होम प्रडक्सनमा ‘जाइरा’ नामक फिल्म आउँदैछ। ‘सञ्चारकर्मीलाई पहुँच नदिएर उनले फिल्मको प्रवद्र्धन कसरी गर्लिन्?’, अहिले रंग पत्रकारहरुबीच चर्चा छ।
प्रकाशित २० मंसिर २०७५, बिहिबार | 2018-12-06 13:17:25